Santo Rosario NgoLwesihlanu Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
El Ingcwele yeRosari NgoLwesihlanu IneeMfihlakalo eziLusizi, ezifundwayo ngezi ntsuku kwaye ngooLwezibini kuphela, zilandelwa ziiMfihlelo eziVuyisayo. Funda ngayo nganye yezi mfihlakalo ihambelana nomhla kunye neevesi apho zikhutshwe khona.
1 Iimfihlakalo zeRosari eNgcwele ngoLwesihlanu
1.1 Iimfihlakalo ezibuhlungu
1.1.1 Umthandazo egadini
1.1.3 Isithsaba ngameva
1.1.4 UYesu ngasemva noMnqamlezo
1.1.5 Ukubethelelwa emnqamlezweni
2 Uyithandaza njani iRosari?
3 Zithini iiNcwadi zeNtombikazi kaMariya?
4 Yayingubani iNtombikazi enguMariya?
5 Ngubani uBathathu Emnye Ongcwele?
5.1 Uyintoni umsebenzi wakho?
5.2 Umthandazo kuBathathu Emnye Ongcwele
Iimfihlakalo zeRosari eNgcwele ngoLwesihlanu
Iimfihlakalo zine kwaye ezi zinxulumene nobomi beNkosi yethu uYesu Krestu kunye nonina. Oku kunokuchazwa ngale ndlela ilandelayo:
Ndiyavuya. (NgoMvulo nangoMgqibelo)
Intlungu. (NgoLwesibini nangoLwesihlanu)
Uzuko. (NgoLwesithathu nangeeCawa)
Ngeli thuba, kuba kungoLwesihlanu, siza kuthetha ngeMfihlakalo eziLusizi.
Kwimfihlelo nganye kwezi zintlanu eziLusizi ezikhoyo, ungazi kwaye ungene ebomini bukaYesu noMariya, ngakumbi kula maxesha agcwele ziintlungu, usizi kunye nokuphelelwa lithemba. Nangona kunjalo, njengoko bethembele ngokupheleleyo kuThixo, bashiye yonke into kwintando yabo. Ezi mfihlakalo zezi zilandelayo zikhankanyiweyo:
UYesu emqolo kunye noMnqamlezo.
UYesu wayesemyezweni kunye nomfundi wakhe ngamnye, ngeloxesha waqala ukuba buhlungu kwaye ngokungathi umphefumlo wakhe wawukhathazekile, wathi kuPeter, John and James «Uhleli apha, sukundishiya ndedwa Ndiyathandaza ». Ngaphandle kwento uYesu awayebaxelele yona, bonke balala kwaye akukho namnye owavukayo.
UPilato uthabatha uYesu aze aqale ukumbetha, ambeke isithsaba ngameva aze amnxibe ngengubo emfusa Bonke babemhlukumeza, bemcaphukisa kwaye bade bamqhwabe nangempama.
Amajoni amthabatha uYesu, ambopha, abuyisa iingubo ezimfusa ngesithsaba sameva. Emva koko bamhambisa ehamba ephethe umnqamlezo.
UYesu ngasemva noMnqamlezo
Bamkhwelisa uYesu, ethwele umnqamlezo emagxeni akhe, ethwele isithsaba sameva entlokweni yakhe. Wafika kwindawo apho wayeza kohlwaywa.
Ukufika kwabo eKalvari, bambeka uYesu emnqamlezweni, ngelixa yena wayesifa kukubandezeleka. Ngaphandle komonakalo abawenze kuye, wacela kuphela uYise onamandla onke ukuba abaxolele, abangenatyala kuba bengayazi into abayenzayo.
Uyithandaza njani iRosari?
Indlela ye thandaza irosari engcwele Kuya kuxhomekeka kuhlobo obhekisa kulo, kule meko, yinto elula, eyesiqhelo esiyaziyo sonke kwaye sihlala sithandaza. Ukuqala kufuneka ulandele amanyathelo esiya kuwakhankanya:
Iqala ngophawu loMnqamlezo oyiNgcwele, emva koko iqhubeke ne umthandazo wokholo yaBapostile; Ngaphandle kwalonto, kuya kufuneka uthandaze kuBawo wethu Osezulwini, Yibingelela uMariya, uGloria kwaye ukusuka apho ushiye ukubhengezwa kweeMfihlakalo.
Njengoko sisazi ukuba ezokuqala ziiMfihlelo eziChulumancisayo, ezi zimele ukuzalwa nobuntwana bosana olunguYesu. Kubaluleke kakhulu ukuba wazi amanyathelo afanelekileyo alo mthandazo, kunye nentsingiselo yawo kunye nokumelwa kwawo.
Ekupheleni kwezi mfihlakalo zikhankanywe apha ngasentla, kuya kufuneka uyithathe le mithandazo kwakhona kwaye ke uqhubeke neeMfihlakalo eziLusizi. Emva koko, yenza imithandazo kwakhona kwaye uqale nge Iimfihlakalo eziqaqambileyo.
Qhubeka nemithandazo esele ikhankanyiwe kwaye uqale ngemfihlakalo yokugqibela, iimfihlakalo eziZukileyo. Qhubeka nemithandazo, ngakumbi eyokuvala, kunye ne-voila.
Zithini iiNcwadi zeNtombikazi kaMariya?
Iinkcukacha zeNtombikazi kaMariya zidweliswe apha ngezantsi:
Yayingubani iNtombikazi enguMariya?
Intombikazi enguMariya kwiCawa yamaKatolika ngumama wokwenene kaThixo. UMariya wabizwa njalo, kuba wagcina uKristu emzimbeni wakhe, othe ngoBathathu Emnye oyingcwele ikwangulaa mntu. Ukongeza, iNtombi eyiNtombikazi ngumfazi olwayo, uthembekile kwaye unikwe uThixo, yayinguye owayehamba naye ngamaxesha onke, nangexesha lokubethelelwa emnqamlezweni.
Ngubani uBathathu Emnye Ongcwele?
UBathathu Emnye Ongcwele uyaziwa njengesiseko esisisiseko seCawe yamaKatolika, kuba ngawo, uMoya oyiNgcwele uluphawu lwehobe elikhulu elinamaphiko omlilo; Ebonakalisa uThixo noYesu Krestu. Yiyo loo nto kusithiwa bangumntu omnye.
Uyintoni umsebenzi wakho?
UZiqu-zintathu eziNgcwele, unomnye weyona misebenzi iphambili, ukusebenzela njengendlela yokumela uThixo, uYesu Krestu noMoya oyiNgcwele; othathwa njengoyise nonyana.
Ukuba uhlelwe lixesha elibi okanye iimeko ezinzima, siza kukushiya apha lo mthandazo mhle ulandelayo:
Bawo, Nyana noMoya oyiNgcwele,
nguwe isiqalo nesiphelo,
Ndihlawula umvuzo wam wenene.
Makabongwe kwaye adunyiswe uBathathu Emnye oyiNgcwele!;
uzuko nendumiso kuwe ngonaphakade kanaphakade.
Ndiyakholelwa kuwe ngentliziyo yam yonke, ndingumkhonzi wakho othembekileyo,
namhlanje ndiza kuwe ndinokuzithemba nokuzithemba okupheleleyo
ukukucela ukuba undikhulule kubo bonke ububi,
kunye nayo yonke ingozi endigrogrisayo,
ndincede kwiintswelo zam, ndicela undinike uncedo lwakho.
UBawo Osezulwini noMalusi Olungileyo,
Ndicela ukuthethelelwa yeNtombikazi enguMariya,
undincede, undikhokele kwaye ube lukhuseleko lwam
ngamaxesha onke, kuyo yonke imicimbi yam nexhala lam.
Uzuko kuThixo uYise, umthombo wokulunga, inceba nobulumko,
ubomi buvela kuwe, uthando luvela kuwe,
yiba nenceba kum nakwiimbandezelo zam, kuzo zonke iimfuno zam
kwaye undinike uncedo lwakho noncedo kule meko inzima.
Unokufumana imithandazo eyahlukeneyo, yezihlandlo ezahlukeneyo kunye neemfuno, kuya kufuneka ufake ibhlog yethu kwaye wazi nganye nganye. Apha sikushiya umthandazo esithanda kakhulu, Umthandazo kuMama oMnandi.